क्यान्सरका शुरुवाती ५ लक्षण - ज्ञानविज्ञान
क्यान्सरलाई बेलैमा पहिचान गर्न सकियो भने रोकथाम पनि गर्न सकिन्छ । क्यान्सरका लक्षण देखिए भने पनि आत्तिइ हाल्नु हुँदैन । तर नियमितरुपमा जाँच र चिकित्सकको परामर्स भने लिनु पर्छ । हरेक जसो क्यान्सरमा देखिने ५ लक्षण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । यी लक्षण देखिएभने कहिले पनि वेवास्ता नगर्नुस् ।
शरीरको कुनै पनि अंग वा भागमा निरन्तर दुखाइ महसुस भयो भने यसलाई वेवास्ता नगर्नुस् । पेन किलर खाएर दुखाइ कम गर्ने मुर्खता पनि नगर्नुस् । महिलामा हुने स्तन क्यान्सर शुरुमा पत्ता लगाउन निक्कै गाह्रो हुन्छ ।
ज्वरो आउनु पनि शरीरमा सञ्चो नभएको संकेत हो । नियमितरुपमा ज्वरो आउनु पनि क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ । क्यान्सर रोग लाग्ने समयमा विभिन्न प्रकारले लामो समय सम्म ज्वरो आउने समस्या हुन सक्छ । कहिले काँहि सिजलन ज्वरो आएको भनेर लापर्वाही गर्दा गम्भिर समस्या पनि हुन सक्छ ।
३. दुब्लाउँदै जानु वा वजन कम हुनु
यदि तपाइँ एकाएक दुब्लाउन थाल्नु भो वा शरीरको बजन १ वा डेढ सातामै १० प्रतिशत सम्म कम भएमा तत्काल जाँच गराउनुस् । कुनै शारीरक अभ्यास नै नगरीकन तौल घट्नु वा दुब्लाउनु राम्रो संकेत होइन । डाइटिङ नै गर्दा पनि एकाएक तौल घट्नु राम्रो संकेत होइन ।
जतिबेला पनि थकान र कमजोर अनुभव गर्न थाल्नु भो भने बुझ्नुस् शरीर अस्वस्थ छ । क्यान्सरका शुरुवाती लक्षणमा थकान र कमजोर हुनु पनि पर्छन् । खासगरी चुरोट वा खैनी सेवन गर्नेहरुलाई यसमा विशेष ध्यान दिनु पर्छ । कतिपय अवस्थामा रक्तचाप कम हुँदा पनि थकाइ लाग्ने र कमजोर महसुस हुने हुन्छ ।
जतिबेला पनि तनाव हुन्छ । दिशा र पिसावको रंग बदलिएको छ भने सतर्क बन्नुस् । यस्तो अवस्थामा सके सम्म छिटो डाक्टरकोमा जानु राम्रो हुन्छ । अधिकाँश मानिस ब्यस्त जीवन नै तनावको कारण भन्ने ठान्छन् तर कहिले काँही यस्तो हुनु गम्भिर समस्याको संकेत हुन सक्छ । क्यान्सकार लक्षण मध्ये अत्याधिक तनाव र शरीर चिलाइरहने समेत पर्छन् ।
Don't Miss it काँचो केरा ग्राहड गर्नाले हुने फाइदाहरु
Up Next पत्रिकामा राखेर चटपटे नखानुहोस्, लाग्छ घातक रोग
जाडोमा हात खुट्टा फुटेर हैरान हुनु भएको छ ? अपनाउनुस यस्ता कुराहरु
जाडोमा हात खुट्टा फुटेर हैरान हुनु भएको छ ? यदि हुनुन्छ भने तलका कुराहरु अपनाउनुस ।  जाडो मौसम छालाका लागि…
पायल्सबाट बच्न कस्तो खाना खानु हुँदैंन, थाहा पाउनुस्
घिउ सन्तुलित मात्रामा घरमै बनेको घिउको सेवनले शरीरलाई फाइदा गर्छ । तर धेरै खानाले पायल्स रोगीलाई झन् समस्या बढाउन सक्छ…
संसारकै ठुलो टेलिभिजन
दक्षिण कोरियाको इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी सामसुङले सिइएस मेलामा सर्वाधिक ठूलो स्क्रिनयुक्त टेलिभिजन सेट सार्वजनिक गरेको छ । यो सेट १ सय…
यस्ता छन्, बट्टामा खाँदिएको अचारले स्वास्थमा पुग्न सक्ने हानि
शरीर सुन्निने अचारलाई लामो समयसम्म सुरक्षित राख्नका लागि सोडियमयुक्त नून हालिएको हुन्छ । सोडियमका कारण शरीरले पानीको मात्रा कायम राखेर…
सुन्दर तथा आर्कषक अनुहार कसको राजाईमा नपर्ला र ? बिभिन्न महंगो केमीकल युक्त शौन्दर्य प्रशाधनको प्रयोगले भएको अनुहारको शुन्दरता पनि…
के तपाइकाे गिजाबाट रगत बग्छ ? बग्छ भने यसो गर्नुस्
गिजाबाट रगत बग्ने समस्याबाट धेरै मानिस पीडित हुन्छन् । यसो हुनुमा विभिन्न कारण हुन्छन् । दाँत र गिँजाको नियमित सफाइ…
स्वस्थ्य रहनका लागि यी खानेकुराहरु खालि पेटमा भुलेर पनि नखानु होस्
१. मदिराः त्यसो त मदिराले स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पुर्‍याउँछ । तर, खाली पेटमा यसको असर अझ बढी हानिकारक हुन्छ ।…